Ukuxoshwa kwamagumbi uMercatino degli Affari - Genoa
Ukuxoshwa Kwamafulethi Nokususwa - Imakethe Yebhizinisi
Kulabo abahlala befuna izivumelwano ...
4.7 /5 amavoti (amavoti angama-52)
Imakethe yebhizinisi e Via Gino Capponi 35 red a Genoa unikezela ngezinsizakalo ze Ukuxoshwa kwamafulethi nokususwa ngaphezu kokuba Imakethe yokukhulisa izingane ngenkonzo ye Ukuthengisa kwe-akhawunti lapho ungakhombisa khona izinto zakho mahhala.
I-Evictions Apartments Mercatino degli Affari eGenoa - Amahora okuvula aqhubekayo nokususwa ngesikhathi sokurekhoda
Okwalabo abafuna insizakalo ye- ukukhishwa kwamafulethi nasendaweni, iMakethe Yezebhizinisi Kuvulwe kusukela ngoMsombuluko kuya kuMgqibelo kusukela ngo-9.30 kuya ku-19.30 ukuvumela wonke amakhasimende ayo ukuthi baphume ngokushesha emakhaya, amakhabethe e sendali. Ukuchitha izinto ezinkulu ezingasasetshenziswa emakhaya, ezakhiweni nasezinqolobaneni kungaba ngumsebenzi ocindezela kakhulu futhi okhandlayo. Ngenxa yalokhu, i- Imakethe yebhizinisi a Genoa uyakusiza, uzinakekele zombili kuxoshwa lokho kwe indlu ehambayo di amafulethi nasendaweni. Ibuye inikeze insizakalo ewusizo kakhulu ye- Ukuthengisa kwe-akhawunti, ngakho-ke okumele ukwenze ukuletha izinto ukuze zihlolwe mahhala bese uqala ukuthengisa ngokushesha lokho ongasakudingi. Kungani uthathe isikhala ekhaya lakho lapho ungasebenzisa khona Ukuxoshwa Amakamelo? Ngenxa yemisebenzi yethu, ukuchitha izikhala zamabhilidi, izindlu kanye nezingubo zokulala kuzoba lula kakhulu.
I-Evictions Apartments Mercatino degli Affari - Ukususwa kanye nokulethwa ekhaya kuyo yonke iGenoa
Imakethe yebhizinisi kungukuthi Imakethe yokukhulisa izingane kuhlonyiselwe Ukuxoshwa Amakamelo, okususwayo ngezifiso kanye nokudiliva ekhaya. Amagumbi okulala ezingane, amakhishi nokunye okuningi akunakuthuthwa kukodwa: nansi insiza yokulethwa kwekhaya etholakalayo kuyo yonke indawo Genoa. Ungathengisa futhi uthenge noma yini oyifunayo, ngaphandle kwengcindezi yokuthi kufanele ucabange ukuthi izinto uzithola kanjani, ikakhulukazi ezinamandla, lapho uhlala khona.
Ukukhishwa, Ukususwa kanye ne-Akhawunti Yokuthengisa: iMercatino degli Affari inezinhlobonhlobo eziningi zezinto nezinsizakalo
Imakethe yebhizinisi inikeza amathuba amaningi kulabo abathengisa nabathengayo. Uma ukhetha i Ukuthengisa kwe-akhawunti, ungathengisa ngokushesha lokho okuthandayo. Uzokhombisa mahhala ezitolo zezimpahla zokugqoka, izinto, izincwadi, ifenisha, izinto zokusebenza, ubucwebe bemvunulo, ama-quilts, izikhwama, amakhithi, amashidi, amabhande, amawashi, amahlaya nokunye okuningi Ngemuva kokuthengisa, uzothola iphesenti elihluka phakathi kuka-50-65% ngokuya ngento ethengiswe ngeMercatino degli Affari. Uma ukhetha ukuthenga, ungakhetha ezinkulungwaneni zezinto ezisetshenzisiwe ezikhethwe ngokucophelela ngabasebenzi. Uzokonakala ngokuzikhethela kufayela le- Imakethe yebhizinisi kanye nokuqiniseka kokuthola njalo izinto ezinokwethenjelwa zisesimweni esihle kakhulu.
I-Evictions Apartments Mercatino degli Affari - Ukususwa emahoreni angama-24 eGenoa
Imakethe yebhizinisi ku-Via Gino Capponi 35 Rosso a Genoa yisisombululo esifanele kulabo abadinga isikhala noma abadinga ukuhamba ngokushesha. Kungakapheli amahora angama-24, i Imakethe yokukhulisa izingane uzofika endlini yakho ezohlola ukuthi yini ofuna ukuyikhipha futhi, uma izimpahla kufanelekile, uyoziletha ngqo esitolo ukuze zithengiswe. The Ukuxoshwa Amakamelo angikaze ngibonge ngokushesha kangaka kwinkonzo enikezelwe Imakethe yebhizinisi. Ungasinika isikhala sokubonga okusha ku- our Ukuthengisa kwe-akhawunti di Imakethe Yezebhizinisi eGenoa.
Ikheli: I-Via Gino Capponi, 35R
I-POSTAL CODE: 16154
Ucingo: 010 4032069
Umakhala ekhukhwini: 342 3290411
Inombolo ye-VAT: 02040400992
sawubona ngingaba neminye imininingwane